जुनियर स्कुल प्रिन्सेस बन्न चाहनुहुन्छ ? आवेदन खुल्यो.. - HAMRO YATRA
जुनियर स्कुल प्रिन्सेस बन्न चाहनुहुन्छ ? आवेदन खुल्यो..
काठमाडौं, फागुन । ‘छैटौ अक्षरा जुनियर स्कुल प्रिन्सेस–२०१७’ को खोजी शुरु भएको छ । बिगत ६ वर्ष देखि वार्षिक बिदामा रहेका स्कुले बहिनीहरुका लागि यो प्रतियोगिता हुँदै आएको छ । आगामी फागुन तथा चैतमा वार्षिक परिक्षा दिएर बसेका काठमाडौं उपत्यकाका ७ देखि १३ वर्षका बहिनीहरुका लागि यो कार्यक्रम हुन लागेको हो ।
कार्यक्रममा भाग लिन चाहनेहरुका लागि फारम खुल्ला गरिएको आयोजक संस्था सिजन मिडियका प्रबन्ध निर्देशक प्रदिपराज वन्तले बताए । चैतको दोस्रो सातासम्म यो प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहनेहरुले फारम भर्न सक्नेछन् । १९ चैतमा पहिलो चरणको छनौट गरिने भएको छ । २० चैतबाट प्रतियोगीहरुको प्रशिक्षण सुरु गरिने भएको छ । प्रशिक्षण हरेक दिन विहान १० देखि बेलुका ४ बजेसम्म गरिने र प्रशिक्षणको अवधीमा सहभागीहरुलाई खाजा पनि खुवाईने भएको छ ।